यो, त्यसै अनुरूप सेलिब्रेट गर्न थाले। बिचरा बुद्धको वास्तविक वाणी आफ्नै शिष्यको वासनाका कारण ओझेलमा प¥यो। आजसम्म आईपुग्दा महान् करुणामयी बुद्धदर्शनमा आधारित बौद्ध धर्म मुन्धुम र कर्मकाण्डको पूजाउपचार र अन्य धर्मजस्तै हिंसा र मांसहारको पक्षपाती बन्न पुग्यो। ठीक यस्तै दुर्गति बुद्धको उदयअघि हिन्दु समाजमा भएको थियो। आज पुनः त्यो दुर्गति लामो कालखण्डपछि दोहोरिएको छ र जसको पृष्ठपोषण दसैँका नाममा हामी घर–घरमा गरिरहेका छौँ।
यस अवधिमा जब उपवास गरिन्छ, सारा आन्तरिक शक्ति शरीरको कुना–कुनामा कुपित भएर बसेको अन्नविकार, वायुविकार, रक्तविकार, उदरविकार, अस्थिविकार लगायत अनेकौँ सूक्ष्म विकारहरू बाहिर निकाल्न केन्द्रित हुन्छ। उपवास भनेको शरीरमा ठोस खाद्य, गरिष्ठ खाद्य, तमोगुणी खाद्य प्रवेश नगराउनु हो। उपवासका दर्जनौँ विधाहरू छन्– पानी मात्रै पिएर जलोपवास, फलफूलल मात्रै खाएर फलोपवास, नुन नहालेको खाएर लवणोपवास, रसदार वस्तु मात्रै खाएर रसोपवास, एकछाक मात्रै खाएर लघु–उपवास आदि।
पेटमा पुगेको मासु पच्न कम्तिमा पनि ९० घन्टा लाग्छ। तर दसैँका नाममा मांसहारी व्यक्ति दिनमै पटक–पटक मासु खान्छ। मासु खाएपछि हलचल, डुलघुम, व्यायाम–कसरत गरे कतै पच्न सजिलो हुन्थ्यो होला। मान्छे यसो गर्दैन, लासको सेवनपछि तासको सेवन सुरु गर्छ। तास–जुवा खेल्ने व्यक्ति त्यसै त रोगी हुन्छ किनकि दिसा–पिसाब रोकेर घन्टौँ कुँजिएर बस्नु उसको बाध्यता हो। माथिबाट तेलैतेलमा तारेको महागरिष्ठ मासु खाएर घन्टौँ बस्नेको हालत के होला ? एकपटक सोचौँ। वास्तवमा दसैँको प्रत्येक गाँस मासुले मुटु र शरीरको स्वास्थ्यमाथि मन्दमन्द प्रहार गरिरहेको हुन्छ।
मानिसको विवेकशीलता र संवेदनाभन्दा ठूलो धर्म, संस्कृति र परम्परा हुँदैन। दसैँका दिनमा मासुका लागि पशुबलि मानवीय विवेकशीलता र संवेदनाको अत्यन्त विडम्बनायुक्त अपसंस्कृति हो। बलि शब्दको अर्थ दान, उपहार, त्याग र उत्सर्ग हो। बलि संस्कृति आरम्भमा तत्वतः आन्तरिक दोष–दुर्गुणहरूको बलिका अभिप्रायले प्रचलनमा आएको थियो। तर बुद्धको सेलिबेट अपसंस्कृत भएर सेलिब्रेट भएभैmँ पराई पशुको बलितिर मोडियो। यस अपसंस्कृतिलाई सबैभन्दा व्यापक पक्षपोषण यही जिब्रोद्वारा वशीभूत ठूलाठालुहरूले गरे। वास्तवमा दसैँमा बलिको विज्ञान र अभिप्राय आज हामीले ठानेको भन्दा पूर्णतः पृथक र गहन थियो। नवरात्रको उपवासद्वारा हाम्रा शरीरका नौ द्वारमार्फत भित्र छिरेका मल–विकारहरूको उपशमन गरिसकेपछि मन स्वतः शान्त र अनुद्विग्न भएको हुन्छ।
चाडबाड निश्चय पनि उल्लास र हर्षको उत्सव हुन्छ। सोचेर हेरौँ, मलविकारले ग्रस्त शरीर र मन हुन्जेल के वास्तविक हर्षोल्लास उद्घाटित हुन्छ ? कदापि हुँदैन। आजभोलिको चाडपर्वमा अनुभव हुने उल्लास केवल तास र लासले उब्जाएको बोक्रे उल्लास मात्र हो। तास–जुवा खेल्दा केहीबेर मनले कृत्रिम रूपले बहिर्मुखी एकाग्र अनुभव गर्छ, अक्सर मान्छे त्यही बहिर्मुखी एकाग्रतालाई उल्लास भन्ठानेर त्यसैमा हराउँछ। बिचरा उसलाई के थाहा मलविकार मुक्ति पश्चातको हर्षोल्लास, कहिल्यै चाखेको भए पो ?
अल्ट्रा मोर्डन जमाना, ग्लोबल विचारधाराको आजको समयका हामी मान्छेले, अब हाम्रा संस्कृति, परम्परा र चाडबाडलाई पनि आधुनिक तराजुमा जोख्नुपर्ने बेला आएको छ। घन्टी बजाउँदैमा धर्म हुँदैन। घन्टी बजाउँदैमा धर्म हुने भए गधाले जीवनभरि घाँटीको घन्टी बजाउँछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २६, २०७३ ०९:५१:१५